मनोरञ्जन Archives - Page3of 15 - Pokhara Post
प्रसिद्ध गीतकार सुमन श्रापितको एकल साङ्गीतिक साँझ पोखरामा हुने
पोखरा। प्रसिद्ध गीतकार सुमन श्रापितद्वारा रचना गरिएका कर्णप्रीय गीतहरुको एकल प्रस्तुती ‘सुमन श्रापित एकल साङ्गीतिक साँझ फाल्गुनको ३० गते पोखरामा हुने भएको छ । सप्तरङ्गी सास्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालको शुक्रबार संस्थाका उपाध्यक्ष अभिमन्यू बिक्रम राणाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘सुमन श्रापित एकल साङ्गीतिक साँझ’ गर्ने निर्णय गरेको हो । गीतकार श्रापित बिगत दुई दशकदेखि पोखरामा रहेर […]
पोखरा लेकसाइडको फियुल बार एण्ड ग्रिलमा दि एज् व्याण्डको प्रस्तुती हुदैँ
पोखरा ।पोखराको लेकसाइडमा अवस्थित फियुल बार एण्ड ग्रिलमा दि एज् व्याण्डको २० औँ बर्ष पार गरेको लास्ट सेलिब्रेसनको उपलक्ष्यमा विशेष सांगीतिक कार्यक्रम गर्ने भएको छ । अत्याधुनिक फियुल बार एण्ड ग्रिलमा शुक्रबार पुस २५ गते विशेष सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना हुन लागेको हो । साझँ ६ बजेबाट शुरु हुने कार्यक्रममा ख्याती प्राप्त दि एज् व्याण्डले राति […]
​मर्यादाको ख्याल गर्ने हो कि महाशय ?
दर्शन शर्मा ०७३ साल जेठ ३० गते उखर्माउलो गर्मीमा पनि काठमाडौंबाट प्रकाशित ब्रोडसिट दैनिकले नयाँ शक्ति नेपालको बाक्लो ज्याकेट लगाएका थिए । त्यतिबेला पार्टी घोषणा गर्दा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले सबैजसो दैनिक पत्रिकालाई ज्याकेट लगाइदिने पैसा कहाँबाट ल्याए भनेर प्रश्न गरिएको थियो । पत्रिकाले कुनै राजनीतिक पार्टीको ‘ज्याकेट’ लगाउन हुने कि नहुने भनेर […]
आस्थामा गायकीको नयाँ फ्लेभर पाउँछौं’ :मदनकृष्ण श्रेष्ठ
काठमाडौं । गायिका आस्था राउतको दोस्रो एल्बम ‘आधार- २’ सार्वजनिक भएको छ । म्यूजिक नेपालले उत्पादन गरेको एल्बमलाई बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच हास्य जोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य (मह), संगीतकार सुरेश अधिकारी, गायक राजु लामा, आस्थाका बाबु हरिबहादुर राउत र आमा साबित्री राउत लगायतले एल्बम सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा कलाकार हरिवंशले आस्थासँग आफूले […]
तीजको साँस्कृतिक मर्म, बहश र विश्लेषण
सुमिता बस्नेत तिजको रहर आयो बरिलै,…………………. मलाई तीजमा पूजा आराधना भन्दा पनि छमछमी नाच्न खूब मनपर्छ । हिजोआज प्रविधिले निकै सजिलो बनाइदिएको छ । यस्सो युट्युब खोल्यो, तिजको गीत बजायो छमछम नाच्यो, गजब आनन्द हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा तिजका बारेमा विभिन्न किसिमका बहसहरू देख्दा मलाई पनि केही लेखँु जस्तो लाग्यो । संस्कृत विद्यापीठका गुरुहरुसँग जिज्ञासा […]
बद्री पंगेनीले मार्ने धम्की दिएको भन्दै जिप्रकामा उजुरी
काठमाडौँ । चर्चित लोक दोहोरी गायक बद्री पंगेनी विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा उजुरी परेको छ । पंगेनी सहितको समूहले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै सुरक्षाको माग गर्दै आज प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको हो । पंगेनीसहितको समूहले संचालन गर्दै आइरहेको दोहोरी साँझबाट लिनु पर्ने रकम माग्दा ज्यान मार्ने धम्की दिएको व्यवसायी निमा दोर्ची शेर्पाले […]
ईन्जिनियर तथा गायक वीरेन्द्र श्रेष्ठको स्वरमा रहेको पिरिमको बाढी बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा संगीतकार दिपक शर्माको शब्द तथा संगीत रहेको छ भने गीतको भिडियोमा अभिनेता दिलिप रायमाझी र केकी अधिकारिले अभिनय रहेको छ । घर हाम्रो लेकैमा, माया लाग्छ निष्ठुरीको, लटरपटर लगायतका गीतहरु सार्वजनिक गरिसकेका गायक तथा ईन्जिनियर वीरेन्द्र श्रेष्ठको फेरी अर्को […]
सलमानको विवाह नहुनुको कारण खानका बुवा सलिम खानले खुलासा गरे
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खानका बुवा सलिम खानले छोराको विवाहको विषयमा खुलासा गरेका छन् । एक अन्तर्वार्ताको क्रममा सलिमले सलमानको विवाह नहुनुको कारण खुलाएका हुन् । एक अन्तर्वार्तामा उनले सलमानको विवाह नहुनुको कारणबारे सोधिएको प्रश्नमा अचम्मलाग्दो उत्तर दिएका छन् । उनका अनुसार कुनै पनि रिलेसनको शुरुमा सम्बन्ध राम्रै चलिरहेको हुन्छ । तर, केही समय […]
पुरुष स्पर्शको हरण !
दर्शन शर्मा महिला आरक्षण लेखिएको दुई जोडी सिट खाली नै थिए । पुरुषहरु अन्तिम सिटमा थिए । त्यहाँ एउटा सिट खालि थियो । झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेको थिएँ, मेरो अनुमान थियो ‘महिला आरक्षण’ जिन्दावाद । ‘एस क्यूज मी’ आवाज कान नजिकै गुन्जियो, मेरो अनुमान विपरित ती युवती मेरै नजिकै आइसकेकी थिइन । आफूलाई सकेसम्म सानो बनाएर, […]
अनाथ बालबालिकाको सहयोगार्थ पोखरामा भोली हुन लागेको सांगीतिक कार्यक्रमको तयारी पुरा
कास्की । अनाथ बालबालिकाको सहयोगार्थ पोखरामा भोली शनिबार हुन लागेको सांगीतिक कार्यक्रमको तयारी पुरा भएको छ । । ‘सेभ द चिल्ड्रेन,सेभ द नेसन’ को आयोजनामा हुने साँगीतिक कार्यक्रमको तयारी पुरा भएको आयोजकले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराएको छ । नेपालको चर्चित कलाकारहरुको बेजोड प्रस्तुति रहने कार्यक्रममा महानायक राजेश हमाल, गायक शिव परियार, गायिका […]